Musadya zvipfuyo zvakafa zvega - The Zimbabwean
Musadya zvipfuyo zvakafa zvega
Vanhu havafaniri kudya nyama yezvipfuyo zvinenge zvafa nezvirwere zvavasingazivi, mutevedzeri wemukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuyo munyika ari mubazi rinoona nezvekurima akadaro.
Mutevedzeri uyu akataura mashoko aya mushure mekufa kwezvipfuyo kwaGutu zvisina tsananguro.
Douglas Pakati akati ibasa rebazi rinoona nezvekuche-ngetedzwa kwakanaka kwezvipfuyo munyika reVeterinary Services kuongorora zvirwere zvinenge zvanyuka mumhuka nekudoma zvikonzero zvinenge zvadziu-raya.
“Handina ruzivo maererano nechirwere chiri kunzi chapedza zvipfuyo kunharaunda yekwaGutu. Asi hazvikurudzirwi kudya nyama yezvipfuyo zvinenge zvafa zvisina tsarukano uye zvaurayiwa nezvirwere zvavasingazivi,” vakadaro VaPakati. Mashoko aVaPakati akataurwa mushure mekubuda kwema-shoko ekuti kwaGutu kwanyuka chirwere chapedza zvipfuyo icho chinofungidzirwa naana mazvikokota vanoona nezvemhuka kuti chingangove chigwadara.
Kunyangwe pasati pave nekutsigirwa zvizere kwekuti chirwere ichi chirimo muzvipfuyo,panotyirwa kuti sezvo chigwadara chichibata kunyanya zvipfuyo nemhuka, chirwere ichi chingangobata vanhu kuburukidza nekusangana nemhuka dzinenge dzine chirwere ichi.
Mutevedzeri wemukuru mukuru mubazi rinoona nezvekuchengedzwa kwakanaka kwezvipfuyo munyika akadomwa nezita rekuti VaNjagu havana kukwanisa kupindura mibvunzo kudzamara nyaya yakaendeswa kupepanhau.